July 2020 - Boga Wise Man
Maxaa Haboon Inuu Dhaqaalaha Somaliland Ku Dhisnaadaa!
Gaasta laga soo saaro gobolka Soomaalida ee Ethiopia gumeysato ayaa tusaale ugu wacan in aynaan ku degdegin inaynu soo saarno shiidaalka Rabbi dhulkeena dhigay. Qodista shiidaalka iyo guud ahaan macdantu badanka waa shaqo ay ku keliyeysteen dhawr shirkadood oo waaweyn. Hadii aynu is nidhaahno soo saara macdanta dalka ama shiidaalka waxa aynu furaynaa albaab ay […]
Waxa layaab leh, ama layaab leh, ama layaab leh, in weli siyaasiga iyo aqoon yahanka reer Somaliland aaminsan yihiin kana shaqeeyaan sidii ay Somaliland ugu heli lahaayeen maalgashi shisheeyi. Waxaad intaa maqlaysaa iyagoo leh aynu doorashooyinka qabano, dumarkeenu haka muuqdaan siyaasada si aynu usoo jiidano indhaha caalamka oo u helno maalgasho shisheeye iyo aqoonsi siyaasadeed. […]
Aqoonsi Doon Mise Gumeysi Doon
Illaa iyo maalintaan garaadsaday waxa aan maqlayay siyaasiga Somaliland oo horumarka dalkeena ku xidhaya iyo inaynu aqoonsi helno. Iyadoon cidiba ina aqoonsan ayaynu markaynu ugu liidanay ee kasoo doognay dagaalada samaysanay Ciidan Qaran, Ciidan Bilays, Lacag, Xukuumad Dimuqraadi ah iyo waxyaabo badan oo dawladnimada u ah aasaas. Balse markasta bulshada siyaasiga Somaliland mucaarad iyo muxaafadba […]
Maxaad u Guursan La’dahay?Maxaad u Shaqo La’dahay?
Sababtaad u shaqo la’dahay. Sababtaad u guur la’dahay. Sababta aan shaqadaadu u ahayn mid kugu filan mushahar ahaan. Sababta ay maceeshadu qaali u tahay.Sababta siyaasiyiinta ina maamulaa tayadoodu u liidato. Sababta qabyaaladu u xoogeysatay.Sababta musuqmaasuqu u hanoqaaday. Sababta dhalinyarada tahriibaysa ee baddaha isku guraysaa u korodhay. Sababta aanay waxbarashadeenu tayo u lahayn. Sababta wadaadadu ribo […]
Tony Blair, Raysal Wasaarihii hore ee Ingiriiska, ayaa waraysi uu ka qaaday wargeyska lagu magacaabo The Guardian lagu weydiiyey sida uu arko mustaqbalka wadanka Ingiriiska. Blair jawaab fiican oo dhinaca yididiilada iyo dhinaca yabaalkaba leh ayuu ka eegay. Dhanka wanaagsan markuu ka eegay wuxuu yidhi Ingiriis ahaan waxaynu ku jirnaa Yurub (waa intaanay Yurub ka […]
Taariikhda Burburka Somaliland (Qaybihii oo dhan)
Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybtii Shanaad
Xikmadii Maamul Ee Cumar Binu Khadaab (Radiyallaahu Canhu)
qawdhan on Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybtii Shanaad
ismail qorshe on Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybtii Shanaad
Cali Ibraahim on Xaas Raadiye Program
Xusuus Qorkii Maxamed S Gees - Sanadihii Cadhada 21
Beertii Gabdhaha Caqliga Badan – Qaybtii 10aad. 11
Xikmadii Maamul Ee Cumar Binu Khadaab (Radiyallaahu Canhu) 7
Somaliland Dagaal Hoose Ayaa Kusocda 4
Godobtii Boqolka Sanadood 4
Qorshe La'aan Iyo Qabiil 4
10 Ficil Ood Ku Garan Karto In Uu Ku Jecel Yahay. 3
Dawlad Noocee Ah Ayaan Jeclaan Lahaa 3
Taariikhda Burburka Somaliland - Qaybta Labaad. 3
Ubaxii Deyrta - Qaybtii 6aad 2